qiimaha birta wali kuma xasilloon Shiinaha
Qiimaha birta ayaan wali xasilooneyn Shiinaha, kor, hoos, kor, hoos rate Sicirka sarrifka USD / RMB sidoo kale ma fiicna, sicirka waa 6.44-6.46 maanta. Qiimaha alaabta ceeriin ee dariiqa jidadka waawayn kor u kacdaa, qiimaha gariiradda biraha galvanized waxay la mid yihiin shalay.Akhri wax dheeraad ah »
Isbedelka qadarinta RMB wali lama dhisin, shirkadaha ganacsiga shisheeye waa inay ka fogaadaan halista sicirka sarrifka
Xigasho: Times Qoraa Maaliyadeed: Yu Siyi Financial Times Dhawaan, qadarinta joogtada ah ee RMB waxay dhalisay walaac. Bishii Sebtember 17, qaybta dhexe ee RMB marka loo eego doolarka Mareykanka waxay sare u kacday 150 saldhig oo u dhiganta 6.7675. Bishii Sebtember 16, qaybta dhexe ee RMB marka loo eego doolarka Mareykanka ayaa sare u kacday ...Akhri wax dheeraad ah »
Isbedelka qiimaha birta Shiinaha ee Sebtember 2020
1. Dib-u-eegista Suuqa Bishii Ogos 2020, qiimaha biraha gudaha ayaa waxyar isbeddelay. Laga bilaabo Ogosto 30, sicirka qiimaha birta waxaa la xiray 3940, koror 50 ka ah dhammaadkii bishii hore. Gaar ahaan, bishii Ogosto, cimilada heerkulka sare ee joogtada ah ayaa ka jirtay waddanka oo dhan, dhismaha hoose ...Akhri wax dheeraad ah »
Shay cusub oo ah xaashida saqafka sare ee FRP
Shandong Baimiao wuxuu dhisay khad cusub oo wax soo saar ah oo ah FRP sheet saqafka caag ah bishii Juun ee sanadka 2020, wax soo saarka sanadlaha ah waa 2,000,000 mitir, inta badan wuxuu soo saaraa qaabka hirarka iyo qaabka trapezoid, hufan, tarjumaad, midab leh. Faa'iidooyinka sheet saqafka FRP: (1) Faa'iido Light ...Akhri wax dheeraad ah »